Alien Invasion ( 2020 ) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားကတော့ october 2020မှာထှကျထားတဲ့အသဈစကျစကျ စိတျကူးယဉျသိပ်ပံဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ…အလှတျစုံထောကျရှီစေးဝဟော ရနျလငျရဲ့အလုပျအပျမှုကွောငျ့သုတသေနလုပျရငျးပြောကျဆုံးသှားတဲ့ ရနျလငျရဲဖခငျရနျတုနျးကိုရှာဖှဖေို့ဖွဈလာပါတယျ….
ရနျတုနျးပေးတဲ့သဲလှနျစအရ သုတသေနခနျးကိုရောကျလာပွီး ထူးဆနျးတဲ့မကောငျးဆိုးဝါးရှိနတေဲ့ လောကတဈခုထဲဝငျသှားမိတဲ့အခါ…..ရှီးစေးဝဟော မကောငျးဆိုးဝါးတှရေဲ့ခွောကျလနျ့တိုကျခိုကျမှုတှကွေုံလာရပါတယျ….ဒီလိုနဲ့ထူးဆနျးတဲ့ရှီးမျောမွို့ကိုရောကျလာတဲ့အခါ……
ဒီမကောငျးဆိုးဝါးတှရေဲ့မူလရငျးမွဈကဘာလဲရနျလငျရဲဖခငျ ရနျတုနျးက ဘယျလိုသုတသေနတှကေိုလုပျခဲ့တာလဲ….ရှီးမျောမွို့မှာ ဘယျလိုလြို့ဝှကျခကျြတှရှေိနတောလဲ….
ဒီဇာတ်ကားကတော့ october 2020မှာထွက်ထားတဲ့အသစ်စက်စက် စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်…အလွတ်စုံထောက်ရွှီစေးဝေဟာ ရန်လင်ရဲ့အလုပ်အပ်မှုကြောင့်သုတေသနလုပ်ရင်းပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ ရန်လင်ရဲဖခင်ရန်တုန်းကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်လာပါတယ်….
ရန်တုန်းပေးတဲ့သဲလွန်စအရ သုတေသနခန်းကိုရောက်လာပြီး ထူးဆန်းတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရှိနေတဲ့ လောကတစ်ခုထဲဝင်သွားမိတဲ့အခါ…..ရွှီးစေးဝေဟာ မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့ခြောက်လန့်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံလာရပါတယ်….ဒီလိုနဲ့ထူးဆန်းတဲ့ရှီးမော်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါ……
ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့မူလရင်းမြစ်ကဘာလဲရန်လင်ရဲဖခင် ရန်တုန်းက ဘယ်လိုသုတေသနတွေကိုလုပ်ခဲ့တာလဲ….ရှီးမော်မြို့မှာ ဘယ်လိုလျို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတာလဲ….